Mayelana NATHI - Zhejiang Jiuerjiu Chemicals Co., Ltd.
Ukuze kwenziwe konke ukufakwa kohlelo lokulungiswa kwenkampani futhi ngokuya ngamalungiselelo omsebenzi wenkampani, ekuseni ngoMashi 2, 2021, inkampani yabamba "i-Long Time Management Reform Initiation Conference" esitezi sesibili sehhovisi. Usihlalo wenkampani uMnu Chen Jincai nephini likamongameli uWang Xiaoli uNkk Tang Xiangyang, Iphini Likamongameli Wezokukhiqiza, uMnu Wang Ming, umsunguli weChengdu Mindao Enterprise Management Consulting Co., Ltd., uMnu Liu Jing, umholi we Ithimba lephrojekthi iMindao, kanye noMnu He Zongkun, umqeqeshi ongumeluleki wethimba lephrojekthi iMindao, bebehambele lo mhlangano, kanye nomholi weqembu lenkampani kanye nabaphathi abaphezulu Inani labantu abangama-37 abebehambele lo mhlangano, obenganyelwe nguWang Chao, umphathi we umnyango wokuthenga.
Okokuqala, uMnu Liu, umholi wephrojekthi iMindao, wenze inkulumo: UMnu Liu uchaze incazelo yangempela nokuqondiswa kwenguquko yenkampani ngokuhamba kwesikhathi kusuka ezicini ezine:
1. Kungani kuguquka: Ifektri ingaqhubeka nokusebenza futhi ithole isikhala sokuthuthuka esingcono, futhi abasebenzi bangakhuphula ukuzethemba kwabo ngokwesisekelo sale nkundla.
2. Luyini ushintsho: ushintsho kumqondo, ekuziphatheni, nasekulawuleni. Ukusebenza kwebhizinisi kungenziwa kube okulinganiselwe, okugxilwe kwinqubo, nokuhlelekile.
3. Ungashintsha kanjani: Sebenzisa indlela yezinyathelo ezi-7 kaMindao ukwenza ushintsho luye ekugcineni.
4. Ukungaqondani kahle koshintsho: ngokwethulwa kokungaqondani okungu-5, ukuze inkampani ivumele ukuthuthuka okuphumelela kakhulu endleleni elungile yoshintsho ngokuhamba kwesikhathi!
UThisha uWang Ming weNkampani iMindao wenze inkulumo: Uma izwe noma inkampani noma umuntu efuna ukuqina futhi efuna ukuqhubeka athuthuke aye phambili, kunenqubekela phambili eqhubekayo yokuqhubekela phambili. Uma imile, izonqunywa ngumlando, umphakathi kanye nemakethe uma ihlala isendaweni. Susa! Injabulo ihlale igcinelwe izingane noma abanye abantu! Uma ufuna ukuba namandla, umuntu ophumelelayo, kufanele wenze umsebenzi onzima!
Ngochungechunge lwefilimu nolwethelevishini oluthi “The Great Qin Empire-The Shang Yang Reform”, uMnu Wang Ming usitshele ngokubaluleka koguquko lwenkampani ngokuhamba kwesikhathi.
Izinguquko zeShangyang zingenye yezinguquko eziphumelele kakhulu eChina yasendulo. Akazange achithwe ngenxa yokushona kukaShang Yang, kodwa waqhubeka. Ngokombono omncane, iShangyang Reform yaqinisa izwe laseQin futhi yaba nobunye bamazwe ayisithupha. Inhlokodolobha, amandla eQin ahlukaniseki nokusekelwa kweShangyang Reform. Ngokombono ojwayelekile, uQin's Shangyang Reform unikeze usizo olukhulu ekuguqulweni kwezizukulwane zakamuva.
Ukuguqulwa kwenkampani ukwenza inkampani iqine, futhi kunendawo enkulu yokuthuthuka emakethe yeglue esheshayo! Izinkulungwane zamalambu azifani neze nemisebe yokukhanya kwelanga, futhi lapho kuqala ukuntwela kokusa, wonke umusi uzokhukululwa nakanjani. Kuphela ngokuthuthuka ngesibindi endleleni yoshintsho lapho singaba nekusasa elingcono!
Inkulumo kaMnu Chen ikhombise umkhombandlela wenguquko futhi ngasikhathi sinye yaqinisa ukuzimisela kokushintsha. Imvamisa kunzima ukwenza okulungile ngoba kungaguqula okulindelwe kwalowo onikwe igunya, ngakho-ke kudingeka ukuzimisela okuqinile. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuguqulwa kwenkampani empeleni kungumqondo wokuwina phakathi kwenkampani nabasebenzi bayo. Uma abasebenzi bengakwazi ukukuqonda, kusho ukuthi kunenkinga ngokuqonda kwabo nokuphakama. Ngeke kusize kakhulu ekuthuthukiseni inkampani. Amathemba aphezulu awanakubekwa kuso, futhi neminikelo yesikhathi esizayo ayinakwenziwa. kunqunyelwe. Ngakho-ke okufanele sikwenze ukunqoba zonke izithiyo ngesisekelo somqondo ofanele, futhi siye phambili, ngaphansi kohlelo oluthuthukile, othile uzolandela! Kusasa nakanjani ngizokubonga namhlanje, ngiyabonga ngokulandela inkampani ngokuhamba kwesikhathi futhi ubambe iqhaza kulolu shintsho! Khula futhi uthuthuke ndawonye nenkampani ngokuhamba kwesikhathi! sebenzani ndawonye! Jabulani ndawonye!
Ekugcineni, ngaphansi kobuholi bukaMnu Chen! Bonke ababambiqhaza ngokuhlanganyela bafunda futhi basayina “Incwadi Yokuzibophezela Koshintsho Lenkampani”. Ngesifungo esikhulu nesibabazekayo, izinguquko zenkampani ziqale ngokusemthethweni.